श्रीमानलाइ मारिदि’ए, १८ बर्षमै बिधूवा, ८ महिने बाच्चाले बाबा पनि भन्न पाएनन्, बने टुहुरो (भिडियो)हेर्नुहोस ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
श्रीमानलाइ मारिदि’ए, १८ बर्षमै बिधूवा, ८ महिने बाच्चाले बाबा पनि भन्न पाएनन्, बने टुहुरो (भिडियो)हेर्नुहोस !
काठमाडौं । ८ महिनाको छोरा काखमा छ । कलिलो उमेर छ । १८ वर्षको कलिलो उमेरमा श्री’मानलाई उनकै साथीले ह त्या गरिदिए । उनको अगाडी आकास जस्तो जिवन बाँकी छ । यो सानो काखको छोराले बाबा भनेर बोलाउन पनि पाएन । १८ वर्ष उमेर टेकेकी यि युवतीको भ’विष्य अब के होला ?
घरमा केही साथी उनका श्री’मानलाई बोलाउन आए । राति उनी आएनन् । श्रीमती सु तेकै थिइन् । छिमेकीले ढोका ढकढकाउन आए । एक जना महिला उनलाई ढोकामा बोलाउन आएकी थिइन् । ह’तार गरेर उठीन् के भयो दिदी ? किन बोलाउनु भयो भनेर सोधिन् । जव उनको दिदीले आफ्ना श्रीमान यो ध”र्तीमा नभएको कुरा सुनाइन् उनले टेकेको ज’मिन भासियो । आँखा अगाडी अँध्यारो भयो । उनी दौडिएर खोला किनारमा पुगिन् । अवस्था हेर्न सकिने थिएन ।
उनले आफ्ना श्रीमानको अवस्था हे’र्न सकिनन् । अहिले पनि त्यो दृष्य आँखा अगाडी घुम्छ । जुन दिन देखि मनदिपले छोडेर गए श्रीमती र उनको आमाको आँखा ओभाएको छैन । उनले राती १२ वजे’सम्म श्रीमानलाई फोन गरेकी थिइन् । साँझ ७ वजे साथी घरभन्दा तल बोलाउन आएका थिए । श्री”मानले जाने बेलामा म आज साथीहरुको मै बस्छु भोली आउँछु भनेर गएका थिए । साँझ श्रीमा’नलाई बोलाउन आउँदा ७, ८ जना साथी थिए । एक जना घर नजिक आएर बोलाए उनलाई देँखे तर अरु अलि पर बसेका थिए । उनीहरुलाई भने आफुले नचिनेको बताइन् । श्रीमान साथीले बोलाएर गएपछि फर्केर आउँछन् की भनेर रातभरी ढोका पनि नलगाई कुरीन् । विहा’न पख निदाएकी थिइन् छिमकी दिदी आएर त्यस्तो खबर दिएको बताइन् ।
अकालमा ज्यान गु”माएका मनदिपको जिवन संधै दुखैदुखमा बित्यो । ११ वर्षको छोरालाई छो’डेर पहिलो श्रीमतीले छोडेर गएपछि उनले अर्को विवाह गरे । वुवाले पनि केही वर्ष अघि नै छो’डेर गए । बुवाको निधन भएपछि परिवारको सबै आर्थिक भार मनदिपकै काँधमा थियो । ११ वर्षको छोरालाई छोडेर हिडेपछि उनले सहाराको लागि अर्को वि’वाह गरेका थिए । १६ वर्षको नाबालिक विवाह गरेका मनदिप विवाह भएको २ वर्षमै अस्ताए । १८ वर्षको उमेरमा विधवा बनाउने मनदिपका सा’थीलाई कडा कारवाहीको माग ग’रेकी छन् ।
Previous देश ‘कोरोनाको महामारी’सँग लडिरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा एक करोडको गलैंचा फेरिँदै
Next श्रीमान होस त यस्तो जसले को’रोना देखिएकी श्रीमतीलाई एकछिन छाडेनन्, जो’खिम मोलेरै सँगै बसेपछी…हेर्नुहोस् ।